PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2019-01-10 - “Andisifuni apha isiXhosa!”
“Andisifuni apha isiXhosa!”
Isolezwe lesiXhosa - 2019-01-10 - IZIMVO - Ngokubhalwe nguXolani Mavela
UMGQIBELO wokugqibela kwinyanga yoMnga, umhla wama-29 xa bekusongwa umnyaka ka-2018, uqale kakuhle kwesa sithili sasemaRhanugeni nesibizwa nge-Upper Karoo ngamakhumsha.
Umzala wam, into kaNgcagawule kumaBamba akwaGxwabule noNgqubekile, ibingomnye kubamenywa kumgidi wonyana kagxa wakhe kweso sithili.
Ithe yakundichazela ngolo hambo le ndoda, indimema kananjalo ukuba ndiyikhaphe, ndanothakazelelo olukhulu, kuba kakade akukho nto ndiyithanda ukogqitha ukutyelela ezinye iindawo, ukuze ndibuke ubuhle bendalo, ndifunde kananjalo kwindlela ekwenziwa ngayo izinto.
Kaloku imizi le kwaXhosa yaziwa ngokuba ayifani ncam, koko ifana ngeentlanti kuphela.
Kuye kube kuhle ke ukubona nokugqalisela okwenziwa kwezinye iindawo, ukuze ubani abe nokufundisa atyale nembewu kuloo ndawo asuka kuyo.
Nanjengamadoda asele ekwixabiso lokuyala amakrwala xa ebuya esuthwini, sivuke kwangonyezi nomzala lo wam, kangangokuba intsimbi yesithandathu ekuseni, ibethe sele sithoba unxano ngentloya kuloo mzi uza kusingatha umgidi, umzi wooBhidekile bakwaHlazo.
Samkelwe ngobubele obumangalisayo kulo mzi, kuba sithe sisanambitha loo ntloya ibibanda ceke kamnandi, kwalandela imixobo yeendidi ngeendidi zekofu nesonka samanzi ebesikhatshwa zizibindi ezigcadiweyo nomhlehlo.
Zingenile iziphathamandla nabahlali, bangena abafana bokombela kuthiwe qhiwu iintonga ligcuntswana labo ke kodwa.
Ngoko nangoko indlela yakhomba kwihlathi elingekude kuya phi, cebu kuhle kwiindonga ekucacayo ukuba zagrunjwa kulungiselelwa umgaqo kaloliwe owawunqumla kuloo lali kwilixa langaphambili.
Ngenene ke akhutshwe kakuhle amakhwenkwe, ekwisithuba seshumi elinesine, ngokwesiko ekhokelwa lityendyana elingusosuthu nongunyana walapha kwaBhidekile.
Bavumile abafana, kwaqulwa, bambi bengazibandezi ekubetheni ikoro neembambo, bekhokelwa nakukungena kakhulu kwibhotile yasemzini.
Kusaselwa umqombothi kuphela yayinqabe mpela ke le nto yokubethana nokugqebhana kwabafana namadoda emigidini, undonakele wafika nezi mbodlelandini.
Sithe chu kuhle kuvunywa kamnandi ngamadoda. Xa kanye sisithi qham gqi namakrwala ooqab’isisu kumazantsi omzi, kwanga kuyaduduma ngumyiyizelo, amakhwelo neengqongqo, kuvuywa kube ke kule mihla, ukuphumelela kwesiko yinto ethakazelelwa ngokugqithisileyo.
Isizathu soku ke kukuba mva nje, isiko lokwaluka sele lifaniswa nokuya emfazweni, kuba emfazweni ijoni kulindelekile ukuba lingabuya liphila, kanti lisenokubuya lingaphili.
Isizathu nezisombululo kule ngxaki ke zifuna kwathina, kudala kuyalwa kuboniswa kodwa ngoku kunjalo, abantwana babhubha ngamanani aphezulu esuthwini.
Bangenile abafana ebuhlanti, kwathiwa thande emthonyameni, waphakama usokhaya ecela inzwi.
Uthethe amazwi endingenakuze ndiwalibale, amazwi ebendiqala ukuwava kwinqanaba lokuyalwa kwamakrwala, amazwi andothuse ndaphela ndixuxuzelelwa sisisu, kangangokuba mzi kantu ithe iqina imini, ndabe ndingasakholwanga, ndalunqamla phakathi olo hambo sacela indlela nomzala lowo wam.
Lo bawo uyibeke yacaca into yokuba abo bafana babuya esuthwini, abo bagidelwayo, bonke bebefunda kwizikolo zasemzini, ngenxa yoku bathetha isiNgesi ngaphezu kwesiXhosa, kangangokuba nayiphi na indoda okanye inkonde eza kuphakama iyale, kufuneka ithethe isiNgesi kuphela kuloo makrwala.
Ngelishwa la mazwi uwathethe lo bawo kukho nam. Ngenxa yokungayifuni into engekhoyo, ingakumbi enokuchaphazela isiXhosa sakowethu, andikwazanga kuzibamba, ngoku bekumele ndilinde ukunikwa ithuba lokuthetha, ndisuke ndaphakama ngenxa yomothuko, ndayibeka kakuhle into yokuba linyala nesenyeliso kwisiko nolwimi lwethu oku akuthethayo lo bawo.
Impendulo yakhe iye yatsola ayagungqa, watsho esithi, “ukuba indoda iza kuthetha isiXhosa, iyale aba bantwana ngesiXhosa, kucacile ukuba ayimenywanga ndim kulo mgidi, mna ndimeme amadoda endiqinisekileyo ukuba asikhupha ngeempumlo isiNgesi kwaye aza kuyala aba bantwana ngaso, loo ndoda mayiphume iphele kulo mzi kabawo, iye kuyala kwimizi engenangxaki yakuyala ngesiXhosa.”
Iinkonde ezinamava ngesiko lethu, amadoda akwaziyo ukuthetha abantwana beve, kuquka nathi singamathandazwe nabathandi besiko, siphakamile sacela indlela kuloo mzi, kwashiyeka abo bebemenyiwe, abo baza kuyala amakrwala ngesiNgesi kuphela.
Xa sivulelwa isango, lowo ebekhankathela la makhwekwe esuthwini, uthethe ngesingqala esithi, “ndlelantle mawethu, lilishwa leshwangusha eli, okoko bendinyamezele ukuthetha nala makhwenkwe ngesiNgesi kusukela mhla angena esuthwini, kanti nangoku sele elapha ekhayeni iya kuba kwasesi siNgesindini?”
Xa siqala sivula lo nyaka mtsha, ndiyaniyala maXhos`amahle, khanivuselele ibuyambo, khanivuselele ukuzithanda nokuzixabisa ngaphezu kokuthakazelela oko kungekokwenu.
Kungenjalo, kuphelile ngathi, sakuba lilifa lentshabalala, sakuba lilifa lentsini.